stovu Bioethanol: uru na ọghọm | Green Renewables
Portillo nke German | 19/04/2022 12:00 | Homelọ Green
N'echiche, okwu ụlọ na-anọchi anya ebe na-ekpo ọkụ nke ezinụlọ, ebe ahụ na-eru anyị ala na ebe nchekwa. Ntinye nke ọkụ ọkụ, ma ọ bụ osisi ma ọ bụ bioethanol, na-enye anyị ọkụ na ịdị ọhụrụ, na-enye anyị ohere inwe ebe izu ike na nke dị jụụ. Na omenala, ebe a na-ekpo ọkụ na-ere nkụ, na inwe otu nwere uru na ọghọm ya. A na-ahọrọ ha maka okpomọkụ ha na-enye, Otú ọ dị, isi ihe na-adịghị mma bụ na osisi na-ere ọkụ na-emepụta anwụrụ ọkụ na ntụ, nke nwere ike ịkpata ísì ọjọọ na ahụ erughị ala n'ụlọ. Nke stovu bioethanol Ha nwere uru na ọghọm dị iche iche ị ga-atụle.
N'ihi nke a, anyị ga-arara isiokwu a na-agwa gị ihe bụ isi uru na ọghọm nke stovu bioethanol.
2 Bioethanol stovu
3 Ọkụ bioethanol ọ na-ekpo ọkụ?
4 Uru na ọghọm dị na stovu bioethanol
5 Dɛn na aba so?
Ndị a bụ stovu na-eji bioethanol ma ọ bụ ethanol dị ka mmanụ ọkụ. A na-ewere ya dị ka ngwaahịa sitere na gburugburu ebe obibi n'ihi na ọkụ ya anaghị emetọ gburugburu dịka mmanụ ọkụ. A na-enweta ya site na nhazi ihe isi mmalite, dị ka ọka, okpete, sorghum, nduku na ọka wit.
Nke bụ eziokwu bụ na e jiri ya tụnyere ụdị mmanụ ọkụ ndị ọzọ a na-emekarị, ọ ka nweghị ọmụmụ ihe na-egosi uru ike ya, ebe ọ bụ na ụzọ mmepụta bioethanol dị ugbu a na-achọ ike dị ukwuu site na mmanụ ọkụ ọkụ ma e jiri ya tụnyere ike e nwetara site na mmanụ ọkụ na-emepụta.
Ọ chọghị ngwaọrụ ọ bụla iji wepụ vapours mmanụ, yabụ enwere ike itinye ya na nke ọ bụla ọnụ ụlọ nke ihe karịrị 25 cubic mita, si otú ahụ na-eme ka ventilashion nkịtị. Ụlọ ọ bụla chọrọ ikuku ikuku kwa ụbọchị, nkeji iri nke ikuku dị ọcha kwa ụbọchị zuru ezu.
Ọrụ ya dị mfe. Naanị tinye mmanụ ọkụ ruo akara nke onye nrụpụta gosipụtara. A ghaghị imechi ọkụ ahụ kpamkpam ma mee ka ọ dị jụụ, na-elezi anya ka ọ ghara ịwụfu akpa ahụ ma ọ bụ fesa bioethanol. Ị nwere ike ime ya na ọwara mmiri ma jiri akwa dị ọcha ka ị ghara ịwụfu. Iji mụnye ọkụ, dị nnọọ nso ọkụ ọkụ ma ọ bụ dakọtara nke ọma, n'ihi na obere ire ere na-adịkarị.
Nsogbu nke mmetọ gburugburu ebe obibi na-eme ka anyị chọọ mmanụ ọkụ na-adịghị emerụ ahụ ọkụ anyị. N'ime ọtụtụ afọ bioethanol aghọwo mmanụ a ma ama n'ụlọ. Ya mere, ọ na-esiri ike ịhọrọ nke kacha mma stovu bioethanol, nyere ọtụtụ ụdị ha na ahịa.
Mgbe ịchọrọ ịzụta stovu bioethanol, ị ga-eleba anya n'ọtụtụ paramita nke ga-ekpebi àgwà ngwaahịa ahụ. Nke mbụ bụ oriri. Ebumnuche izugbe nke ịzụrụ bụ nwere kpo oku na akụ na ụba ma na-enweghị adịkwa mma. Ọnụ ego nke stovu ma ọ bụ ọkụ ọkụ bụ ihe dị mkpa iji tụlee. Nri nke bioethanol na-adabere n'otú stovu ahụ dị, ọnụ ọgụgụ ndị na-ere ọkụ na oghere nke ọkụ.
Ọzọ oke na anyị ga-n'ime akaụntụ bụ ike. Ka ọkụ ọkụ ahụ na-enwekwu ike, otú ahụ ka ihe oriri ahụ ga-esiwanye ike. Ọ kacha mma inwe ezigbo nguzozi n'etiti ike na oriri.
N'ikpeazụ, otu ozi dị mkpa bụ nha. Ka ibu ngwaahịa a na-ajụ, otú ahụ ka ị ga-erikwu. Nke a na-eme ka anyị pụọ na mmekọrịta a dị n'etiti ike na oriri. Ya mere, ị ghaghị ịhọrọ stovu nke dabara nha nke ọnụ ụlọ anyị chọrọ ikpo ọkụ.
Ọkụ bioethanol ọ na-ekpo ọkụ?
Igwe ọkụ Bioethanol na-enye ụdị okpomọkụ site na convection. Ọ bụghị naanị na nke a nwere ike ikpo ọkụ ụlọ anyị nọ n'ime ya, ma enwere ike gbanwee ya na ụlọ ndị ọzọ. A naghị ejikarị ya eme ihe dị ka isi kpo oku.
Emebere ha ka etinye ha n'ime ụlọ ebe anyị na-anọkarị oge. Dabere na ike ha na nha ha ga-ekpo ọkụ karịa ma ọ bụ obere. Ike a na-emekarị na ebe nchekwa biofire bụ 2 KW. Site na ike a, anyị nwere ike ikpo ụlọ dị ihe dịka 20 square mita. N'ụzọ dị otú a, dabere na ọnụ ụlọ anyị, anyị nwere ike ịma ike ịzụta.
Uru na ọghọm dị na stovu bioethanol
Ojiji nke ngwaọrụ ndị a nwere uru na ọghọm ha.
Ndị a bụ uru ya:
Ha bụ gburugburu ebe obibi na mfe iji wụnye.
Ha achọghị ndị na-ewepụta ihe ma ọ bụ ọkpọkọ ikuku.
A na-eru ọkwa okpomọkụ ha ngwa ngwa.
Ha na-eweta nhazi ọzọ n'ụlọ.
Ha dị mma ma dị mfe gbanyụọ.
Ọnụahịa ahụ dị oke ọnụ.
Ha nwere obere nlekọta.
N'ime ihe ndọghachi azụ ya anyị na-ahụ:
Bioethanol dị ntakịrị karịa ọnụ.
Ọ bụ ezie na ọ naghị ewepụ anwụrụ ọkụ ma ọ bụ ntụ, ọ na-eme ka ọ pụta ìhè.
Ikike ikpo ọkụ dị oke karịa. Ọkwa oxygen zuru oke ga-adịrịrị iji zere oke CO2.
Opekempe anya ị ga-enwerịrị na arịa ụlọ bụ otu mita.
Dɛn na aba so?
Na okwu nke ọkụ na kpo oku, ajụjụ na-ebilite mgbe niile ma ọ dị mma. stovu bioethanol ha dị nnọọ nchebe, ebe ọ bụ na nkwụsị ya dị nnọọ mfe. Tụkwasị na nke ahụ, ọtụtụ ụdị nwere ụfọdụ ihe nchebe maka ọkụ ọkụ na-enyere aka igbochi anyị ọkụ na mberede.
Ọkwa ya dị n'ihe egwu dị ala karịa nke nkụ nkụ nke ọdịnala, ebe ọ bụ na ọ dịghị ọkụ ọkụ ma ọ bụ osisi na-ere ọkụ. Ka stovu bioethanol anyị ga-adị mma kpamkpam, anyị ga-asọpụrụ ebe nchekwa dị otu mita.
A ghaghị imeju bioethanol ka ọ na-eri. Enwere ụdị na ụdị dị iche iche nke bioethanol. Dị ka ịdị elu dị elu ọ nwere, otú ahụ ka ikike ikpo ọkụ ga-enwe, na mgbakwunye na ịhapụ obere ísì.
Nri nke bioethanol na-adabere kpamkpam na ike ọkụ na oge ọkụ. Igwe anwụrụ ọkụ ọ bụla nwere ikike tank. Dabere n'ihe ọ nwere ike ịbanye, combustion ahụ ga-adịgide karịa ma ọ bụ obere.
Otu n'ime ihe ndị a ga-echebara echiche mgbe ị na-eri bioethanol bụ ike ọkụ na oghere ọpụpụ. Na-emekarị ọkụ N'etiti 0,20 na 0,60 lita bioethanol kwa elekere. Enwere ike ịsị na nke a bụ oriri ọkọlọtọ, ya mere, site na otu liter nke mmanụ ụgbọala, anyị nwere ike inwe ire ọkụ na etiti dị n'etiti awa 2 na 5.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere uru na ọghọm nke stovu bioethanol.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Homelọ Green » Bioethanol stovu